स्विमिंग पूल - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा सुरक्षा हात नाउहरु
सेप्टेम्बर 20, 2017
अग्लो, गर्मीको स्नानको मौसममा प्रारम्भमा बच्चाहरू ठुलो पानीमा हिड्न चाहन्छन्। चाहे स्विमिंग पूल, नहाने को झील, पूल या पैडलिंग पूल, पानी को बच्चाहरु लाई बच्चाहरु लाई आकर्षित गर्दछ। यो कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन कि, सबै भन्दा माथि, गहिरो पानी बिना स्विमिंग बच्चाहरु को लागि एक खतरनाक जोखिम हो। अर्को छेउमा, अर्कोतिर, केही सेन्टिमिटरमा पानीको गहिरो पहिल्यै डुब्न सक्छ। हात नाउहरु कम्तीमा बच्न अनियन्त्रित डूबबाट बच्न रोक्नुहोस्। तर कुन स्विमिंग पूलहरू बच्चाको लागि उपयुक्त छन्, कुन उमेरमा तिनीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र सुरक्षाको सन्दर्भमा परम्परागत स्विमिंग पूलमा कमान्ड गर्न सक्छन्?
1 स्विमिंग पूल कुन हो?
2 कसको आयु स्विमिंग पूल उपयुक्त छन्?
3 स्विमिंग पूल को गुणवत्ता
4 स्विमिंग पूल कति सुरक्षित छन्?
5 स्विमिंग पूलहरू कहाँ प्रयोग गर्ने?
6 बाट र कुन वजनमा, बन्दूकहरू तैरेर सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
7 अतिरिक्त सुरक्षा जोखिमहरू देखा पर्नु हुन्छ?
स्विमिंग पूल कुन हो?
बच्चाहरु जो तैरने को लागी नहीं गरेर सकते या वर्तमान मा तैरने को लागि सीख रहे हो तैरने वाला सहायता को उपयोग गर्नु पर्छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि स्विमिंग सिक्न सजिलो छ। स्विमिंग एड्स विभिन्न आकार, रंग र गुणहरूमा उपलब्ध छन्। नियमको रूपमा, स्विमिंग पूलहरू पूर्व-परीक्षण vinyl बाट बनाइएका छन्, किनभने सुरक्षा र गुणस्तर सधैं उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ। तिनीहरूले लेबल EN13138 मा त्यस्ता पखेटाहरूको उच्च गुणस्तर जोडेको पहिचान गर्छन्। यो युरोपेली सुरक्षा मानक हो र यो सुनिश्चित गर्दछ कि आमाबाबु सामान्यतया आफ्नो बच्चाहरु को लागि यस उत्पादन को उपयोग गर्न सक्छन् बिना डर। स्विमिंग पंखहरू एक जोडाको रूपमा उपलब्ध छन् र मुखबाट कम प्रयासमा फ्याट गर्न सकिन्छ। पखेटा बच्चाको माथिल्लो हातमा राखिएको छ। यस प्रयोजनको लागि बच्चाको हतियार एक पङ्क्तिबाट हटाइन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि स्विमिंग पंख धेरै ढिलो छैनन्, किनभने तिनीहरू ढिलो हुनेछन् र पानीमा हराउँछन्। धेरै बलियो एक होल्डले स्विमिंग पूल को संभाला बच्चाहरुलाई बेवास्ता नगर्न पनि सक्छ। फ्लोट्सले तपाईंको बच्चालाई आरामपूर्वक पानीको सतहमा झूट र आफ्नो पहिलो स्विमिंग अनुभव बनाउन अनुमति दिने पर्याप्त बानी प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको छ। बच्चाहरु जो पहिले पानी मा कभी नहीं गएको छ, पहिले उर्वरिय पानी मा फ्लोट्स को परीक्षण गर्नु पर्छ र आफ्नो पर्यवेक्षण को तहत, टुकडा द्वारा आवश्यक अनुभव टुक्रा एकत्र गर्नु पर्छ।
कसको आयु स्विमिंग पूल उपयुक्त छन्?
लोकप्रिय स्विमिंग एड्स विभिन्न आकारमा बनाइन्छ र उमेर अनुसार चयन गर्न सकिन्छ। रबड वा vilyl र नरम, प्रफुल्टेड राज्यको तिनीहरूको बनावटले स्लिमलाई ढाल गर्न मद्दत गर्दछ। धेरै अवस्थामा यी चीजहरू अधिकांश बालबालिकाको हातमा अनुकूल हुन्छन्। तथापि, एक्सएनएनएक्स महिनाको उमेर बाट शुरुमा यस्ता स्विमिंग पूलहरूको प्रयोग सिफारिस गरिएको छ। प्रयोगको अवधि तपाईंको बच्चाको स्विमिंग अनुभवमा निर्भर गर्दछ। अक्सर, स्विमिंग पूलहरू6वा सात वर्षको उमेरमा प्रयोग गरिन्छ, केही अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म। पखेटाको प्रयोग सधै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तपाईले मान्नुहुन्छ कि तपाईंको बच्चाले पर्याप्त फ्लोटमा आफूलाई पानी माथि राख्नु पर्ने छैन। चाँडै नै तपाईलाई थाहा छ कि बच्चाले पानीमा स्वतन्त्र रूपमा तैर्न सक्छ र सुरक्षित महसुस गर्छ, तपाइँ तैरने एड्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला, स्विमिंग पूलहरूले नैतिक समर्थनको रूपमा सेवा गर्छन्, शान्ति सुनिश्चित गर्छन् र पानीको तत्वको डर लिन्छन्।
स्विमिंग पूल को गुणवत्ता
स्विमिंग एड्स पानी को बच्चा को डर ले र नियंत्रित तैराकी को बारे मा जानन को लागी मतलब हो। यद्यपि, छोराछोरीहरूलाई कहिल्यै पर्यटकीय पानीमा प्रवेश नगर्ने, किनकि अपरिहार्य परिस्थितिहरू हुन सक्दछ जुन वयस्क बजाउने हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाइँ एक स्विमिंग पूल किन्नुहुन्छ, तपाईलाई सधैं सम्झना छ कि यो बच्चालाई एक निश्चित ब्योपन दिन्छ, तर पानीमा डूबने को लागी कुनै ग्यारेन्टी नदिनुहोस्। तथापि, स्विमिंग पूल जस्ता स्विमिंग एड्स पानी मा आदर्श सहायता हुन सक्छ जब राम्रो तरिकाले प्रयोग गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, यो ध्यान दिनु पर्छ कि स्विमिंग पूलहरु को स्वीकृति र अन्य गुणवत्ता सुविधाहरु को सील हुनु पर्छ। यी स्विमिंग एड्सको प्रत्येक जोडीले यस्ता अवस्थाहरू सामना गर्न सक्दैन। विशेष रूपमा छुट्टै देशहरूमा, जहाँ स्नान नावहरू, वायु ग्रेस र अन्य स्नान सूटहरू समुद्र तटमा सस्तो प्रस्तावित छन्, त्यहाँ प्राय सस्तो र खराब स्विमिंग पूलहरू छन्। धेरै अवस्थामा, यी उत्प्रेरक एड्सले मध्य सुरक्षा प्रदान गर्दैन र शायद नै आवश्यक आवश्यक छ। केहि उत्पादनहरू पनि नक्कली स्विमिंग पूलको रूपमा देख्न सकिन्छ, त्यसैले यो निश्चित गर्न दोस्रो छनौट लिन लायक छ। उत्पादनहरूमा विरूद्ध लिनुहोस् जुन विदेशी भाषाहरूमा वर्णन छ र केवल जर्मन प्रयोग र सुरक्षा निर्देशनहरूसँग मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सार्थक छ, किनकि परीक्षणले धेरै परीक्षणहरुमा देखेको छ केहि बिन्दुहरुलाई यस बिंदु मा निवेश गर्न को लागी अन्ततः एक उत्पादन को लागी पानी को स्थितिहरु र सुरक्षा को आवश्यकताहरु लाई सामना गर्न सक्छ।
स्विमिंग पूल कति सुरक्षित छन्?
माथि उल्लेखित रूपमा, स्विमिंग पूल स्विमिंग पूलमा दुर्घटनाबाट बच्न ग्यारेन्टी होइन। यो मुख्यतया वयस्कको जिम्मेवारी हो। त्यसोभए, भिडन्त सहायताको सहायताको बावजूद तपाईंको छोराछोरीलाई नबिर्सनु नदिनुहोस्। अस्थायी पंखहरूको रूपमा उच्च गुणस्तर उदारता सहायता प्रत्येक जोडीको लागि मुद्रास्फीति वाल्व प्रदान गर्दछ। अघिल्ला मोडेलहरूको विपरीत, आजको संस्करणहरू दुई एयर कक्षहरू छन्। यद्यपि यदि फलाम कुनै कारणको लागि क्षतिग्रस्त हुन्छ भने, हावा बल बिना बलबाट बचाउन सक्दैन। यसले तपाईंको बच्चालाई थप सुरक्षा पक्ष प्राप्त गर्नबाट रोक्छ र उच्च गुणवत्ताको स्विमिंग पूलले डाइमोरेंसलाई रोक्न सुनिश्चित गर्दछ। यसको अतिरिक्त, धेरै निर्माताहरूले बोलाइएको गैर-रिटर्न वाल्व स्थापना गर्दै छन्। गैर-फिर्ती वाल्वले पनि आत्म-हस्तक्षेप बिना बचाउनबाट हवालाई रोक्छ, यसैले थप स्विमिंग पूलको सुरक्षा बढावा दिन।
स्विमिंग पूलहरू कहाँ प्रयोग गर्ने?
व्यावहारिक स्विमिंग एड्स सामान्यतया प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ पानीले स्नान निम्ताउँछ। बच्चाको स्विमिंग समर्थन गर्न केवल एक पर्यवेक्षक आवश्यक छ। हामी स्विमिंग पूल मा स्विमिंग पूल को उपयोग को सिफारिश गर्छन, किनकि यो पहिले नै पानी को आकलन गर्न को लागि आदर्श तरीका हो। अवस्था जंगली पानीमा फरक छ। कुनै कुरा छैन कि तपाईं झील वा नदीमा तैरेर गर्दै हुनुहुन्छ भने, दुवै पानीमा, खतरनाक सुरक्षा खतराहरू पराजित हुन सक्छ, जसले स्विमिंग पूल जोडीको सुरक्षा बिग्रियो। सुरक्षा शाखाहरू वा शाखाहरू, ढुङ्गाहरू वा अन्य प्राकृतिक बाधाहरू खराब परिणाममा पखेटाहरूको बाह्य लिफालाई क्षति पुर्याउन सक्छ र तपाईंको बच्चालाई चाहिन्छ। समुद्रमा स्विमिंग पूलहरूको प्रयोग सधैं पर्यवेक्षणमा रहनु पर्छ। यहां सम्म कि तपाईंको छुट्टियों को देश मा निर्भर गर्दछ, तपाईंको बच्चाहरु को लागि खतरनाक हुन सक्छ कि मसेल्स, माछा या धाराहरु को रूप मा खतरों। सधैं आफैलाई आफैलाई सूचित गर्नुहोस्, जहाँ तपाईंको बच्चाले स्विमिंग पूल प्रयोग गर्न सक्दछ। पनि संकेतित floats संग, बच्चाहरु फ्लोट पूल वा पानी को एक गहिरो क्षेत्रहरुमा प्रवेश गर्न हुँदैन। ब्रोयन्स एड्स को इरादा छैन कि तपाईंको बच्चा को बिना पर्यवेक्षित डूब नहीं हो सके। सधैँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बच्चाले गैर स्विमिंग पूल वा गैर स्लिमर क्षेत्र छोड्नु हुँदैन। यस्ता स्थानहरूमा, बच्चाहरू सामान्यतया संदेहमा खडा हुन सक्छन् र डूब गर्ने जोखिम नदिईन सक्छन्।
बाट र कुन वजनमा, बन्दूकहरू तैरेर सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
वजनको प्रयोगले धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। विभिन्न मोडेलले विभिन्न वजन वर्गहरूलाई अनुमति दिन सक्छ। एक नियमको रूपमा,3वर्षका बच्चाहरु को लागि डिजाइन गरिएको स्विमिंग पूल6वर्ष सम्म 18 र 30 किलो को बीच एक वजन वर्ग को लागि डिज़ाइन गरिएको छ। यसैले यो उपयुक्त नियमहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सल्लाह दिइएको छ, जुन स्विमिंग पूल खरिद गर्नु अघि प्याकेजिङ्गमा निर्माताले संकेत दिएको छ। केहि स्विमिंग पूल पंख एक ठूलो वजन हुन सक्छ, अन्य निर्माताहरूले यस्तो सूचना पनि गर्दैनन् र केहि उत्पादनहरूसँग निकै कम वजन छ जसले सानो बच्चाहरूको प्रयोगमा बढी मनपर्छ।
अतिरिक्त सुरक्षा जोखिमहरू देखा पर्नु हुन्छ?
स्विमिंग पूल को सुरक्षित भण्डारण को ध्यान राख्नुहोस्। एक उच्च मात्रामा सूर्यको रोशनीले केहि अवस्थाहरूमा सामग्रीलाई घृणा गर्न सक्छ। तीव्र वस्तुहरू वा तीव्र वस्तुहरू, स्विमिंग पूलको तत्काल वरिपरि भण्डारण गर्नु हुँदैन। सबै भन्दा माथि, रेत समुद्र तटमा, यो रेतबाट पानी मुक्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो पंख वा वाल्व को बाहिर छालालाई पनि क्षति पार्न सक्छ। इष्टतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि फ्लोटिङ ब्याटिङहरू फ्लाइट गरिएको अवस्थामा सधैँ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अघिल्लो लेखपाल प्ले
अर्को लेखपरिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर